Liverpool ayaa dooneysa in ey ugu yaraan ka sameyso £100m iibinta cayaartooyda aan kooxda ubaahneen %
Liverpool ayaa dooneysa in ey ugu yaraan ka sameyso £100m iibinta cayaartooyda aan kooxda ubaahneen
By Ramzi Yare	 On May 16, 2019
Tababare Klopp ayaa ku qasban in sida ugu dhaqsiyaha badan uu go’aan uga gaaro hadii uu ku darsanaya qorshihiisa xili cayaareed 2019/20 Marko Grujic iyo Harry Wilson.
Grujic 23 jir (Hertha Berlin) iyo Harry Wilson 22 jir (Derby County) ayaa xili cayaareed fiican kuwada qaadanaaya kooxaha ey amaahda ugu cayaarayaan xili cayaareed.
Liverpool ayaa ugu yaraan ku iibin doonta Grujic £20m halka Harry Wilson sido kale ey ku dooneysa lacago ka agdhow midaas.
Nathaniel Clyne oo Bournemouth amaah ugu jooga ayaa sido kale loo badinayaa in Albaabka latusi doono waxaana xiiseenayaan kooxo badan oo kacayaara horyaalka Premier League oo ey kamid tahay West Ham, Liverpool ayana iibin doonta hadii ey hesho dalab £15million ah.
Simon Mignolet ayaa doonaaya in uu raadsado koox udamaanad qaadi karta boos joogta ah waxeyna Liverpool ku iibin doontaa £12m.
Rafael Camacho ayaa soo jiitay indhaha kooxo badan oo ey ugu horeyso Sporting Lisbon, Liverpool ayaana da’yarkaan ku iibin doonta £10m walow ey isku dayi doonto in ey sii ceshato.
Hordhaca: Kulanka Dhaxmari Doona Kooxaha Muqdisho City Club…
Falanqeynta: Soomaaliya iyo Eretrie-Wax ka Ogow…
Liverpool Oo Hishiis Cusub Ka Saxiixanayso Daafaceeda Van…
Ryan Kent oo xili cayaareed fiican ku qaadanaaya kooxda macalin Gerrard ee Rangers sido kalana loo doortay PFA Scotland Young Player of the Year ayaa sido kala Albaabka latusi doona iyadoo Liverpool ey ogolaan doonto dalab £12m ah.
Walow uusan hal kulan xitaa ucayaarin Liverpool Taiwo Awoniyi hadana xidigaani reer Nigeria ayaa Liverpool kusoo biiray sanadii 2015, wuxuu heli wayay warqada shaqo ee UK taasoo Liverpool ku qasabtay in ey marar badan amaah kudiraan.
Awoniyi xili cayaareedka soo socda xitaa ma heli doono warqada shaqada ee UK sidaasi awgeed Liverpool ayaa diyaar u ah in weeraryahankaan iska iibiso, kooxda Schalke ayaana kamid kooxaha xiiseenaaya balse Reds-ku waxey doonayaan £10m.
Sido kale Liverpool ayaa go’aan ka gaari doonta Sheyi Ojo iyo Ovie Ejaria hadii ey iibineysa iyo hadii ey mar kale amaah ku direyso.
waxaa kaloo jiri doona cayaaryahaano kale oo kooxda laga diri doono haba ubadnaadaane kuwa Acadamy-ga.
8-da Saxiix Ee La Filayo In Ay Dhacaan Suuqa kala iibsiga premier League ee furmay maanta
Hordhaca: Man City Vs Watford Ee Finalka FA Cup-ka
Hordhaca: Kulanka Dhaxmari Doona Kooxaha Muqdisho City Club iyo Malindi Sports Club
Falanqeynta: Soomaaliya iyo Eretrie-Wax ka Ogow Xaqiiqooyinka Ciyaarta
Liverpool Oo Hishiis Cusub Ka Saxiixanayso Daafaceeda Van Dijk
Neymar Oo Barcelona U Qabtay Wakhti Ay Ku Dhamaystiraan Heshiiskiisa
Falanqeynta: Parma vs juventus- daafaca Matthijs de Ligt,…
Lambarka uu Franck Ribery u xiran doono kooxdiisa cusub ee…
Franck Ribery Numberka u xiran doono kooxdiisa cusub ee…
Ronaldo oo wiilkiisa curadka ah u dhigay cashar uusan…
Juventus Oo Noqotay Kooxda Fursada Ugu Badan U Haysata…